နယ်စည်းမခြားဆရာ ၀ န်များသင်္ချာ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 30, 2006 ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 30, 2006 Douglas Karr
ငါမှာခဏတာအတွက် Borders Rewards ကဒ်ရှိတယ်။ ငါသုံးနိုင်တဲ့ပိုက်ဆံအများကြီးရှိတဲ့အီးမေးလ်တစ်ခုပဲရတယ်။ ငါအွန်လိုင်းတယ်နှင့်သူတို့၏ website တွင်မှတ်ပုံတင်။ အဲဒီအချိန်မှာသူတို့ကမှတ်ပုံတင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရွေးချယ်မှုသုံးခုထဲကတစ်ခုကကျွန်တော့်ကိုဆုချခဲ့တယ်။
ငါ $ 20 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖြုန်းတဲ့အခါမှာတ ဦး တည်းကို item 20%
အခမဲ့ 12oz ပူအဖျော်ယမကာ
ငါ $ 10 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖြုန်းသည့်အခါ $ 50
နံပါတ် ၁ နဲ့နံပါတ် ၃ အတူတူဆိုတာရယ်လို့တခြားသူကရယ်နေသလား။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဒေါ်လာ ၅၀ သုံးစွဲပါကမက်လုံးသည် ၂၀% ထက်မပိုသင့်ပါ။
ဒီတစ်ခါလည်းငါပဲ။ ငါကတန်ဖိုးထားတယ်! ထိုအ ... ငါတကယ်နယ်နိမိတ်ကိုချစ်!
မတ်လ 6, 2007 မှာ 10: 48 pm တွင်
20% ချွတ် $ 100 = $ 20 ချွတ်
10 = $ 100 ချွတ် $ 10
သြဂုတ် 9, 2007 မှာ 2: 07 AM
ထိုကြောင့်ခေါင်းစဉ်သည်နယ်နိမိတ်ဆုများသင်္ချာဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဒေါ်လာ ၅၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောကူပွန်တွင်ဒေါ်လာ ၁၀ ကိုလျှော့ချခြင်းမှမည်သည့်အကျိုးမျှမရရှိနိုင်ပါ။
4:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 2, 11
1 နဲ့3အကြားခြားနားချက်ကတော့ # 1 ကို item တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲသုံးလို့ရတယ်။ နံပါတ် (၃) သည်အကန့်အသတ်မရှိသောပစ္စည်းများအတွက်ဖြစ်သည်။